Turkiga iyo shirka Soomaalida - BBC News Somali
Turkiga iyo shirka Soomaalida
Image caption Erdogan oo booqanaya xero qaxooti magaalada Muqdisho
Mar kale ayaa Turkiga shirka caalamiga ah ee uu martigelinayo toddobaadkan, waxaa uu rajeynayaa inuu indhaha beesha caalamka ku soo jeediyo Somalia.
Shirkan labada maalmood ee ka dhacaya magaalada Istanbul, oo bilaabanaya 31ka bisha May, waxaa uu daba joogaa shirkii London ka dhacay bishii February ee sannadkan.
Shirka Istanbul waxaa hal ku dheggiisu uu yahay "diyaarinta mustaqbalka Somalia, hadafyada sannadka 2015".
Dowladda Turkiga oo horey u qaadey talaabooyin muuqda oo samafal loogu fidinayey Somalia, ayaa waxay rajeyneysaa iney hesho dowlado kale oo kala shaqeeya abuurista hanaan loo wada dhan yahay oo dhanka siyaasadda iyo dhaqaalaha intaba leh.
Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey, Ban Ki Moon ayaa shirkaasi guddoomin doona. Waxaa shirkaasi ka soo qeybgeli doona madaxweynayaal,raiisul wasaareyaal iyo wasiiro ka socda ilaa 54 dal, oo ay wehliyaan wakiilada ururada caalamiga iyo kuwa goboleed qaarkood. Waxaa iyana shirka jooga ergo ka socota ururada bulshada.
Maalinta kowaad ee shirka waxaa diiradda lagu saari doonaa arrimaha dhaqaalaha .
Waxaa qeybaha ugu muhiimsan ee laga doodi doonaa ay noqon doonaan iyadoo qaab iskaashi loo wajahayo tamarta, biyaha, waddooyinka iyo dib u soo kabashada.
Mar la weydiiyey waxa ay u la jeedaan "dib u soo kabashada" mas'uuliyiinta Turkiga waxay ku qeexeen inay u la jeedaan horumarinta hab loogu talagalay in lagula tacaalo xasaradaha aadminimo iyo kuwa dabiiciga intaba, si loo sugo helista cuntada, adeegyada aasaasiga ee nolosha iyo wixii la hal maala.
Maalinta labaad ee shirka waxaa uu noqonayaa mid u dhexeeya guddiyo heer sare oo ay wadajir u guddoomin doonaan Raiiusul Wasaaraha Recep Tayyip Erdogan iyo Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey Ban Ki-Moon. Waxaa qeybtan looga doodi doonaa arrimo la xiriira siyaasadda, amniga iyo horumarinta dhaqaalaha. Gabagabada shirkana waxaa laga soo saari doonaa war murtiyeed.
Wasiirka Arrimaha Dibedda ee Turkiga Ahmet Davutoglu waxaa uu la kulmey ururada bulshada Soomaalida aakhirkii toddobaadkii hore. Waxaana uu u sheegey in Turkigu sii wadi doono taageerada uuu fidiyo Somalia.
"somalia waxay noqotey mid ka mid ah arrimaha muhiimka ah ee siyaasadda dibedda ee Turkiga, sababtoo ah waxaa jirey xiriir qoto dheer oo labada dal u dhexeeyey" ayuu raaciyey wasiirku.
Davutoglu waxaa uu sheegey oo kale in Turkigu aanu dan gaar ah ka lahayn Somalia, isla markaana aanu jirin khatar dhanka amniga oo kaga imanaya, laakiin waa meel damiirka aadmiga uu ka damqanayo. Waxaa uu xusey in Turkiga uu fuliyey dhamaan balamadii Somalia kaga aadanaa, waxaana uu sheegey in kaalmada Turkiga ee Somalia sannadkii la soo dhaafey uu qiyaas ahaan gaarayo ilaa 365 million oo dollarka Mareykanka ah.
Sannadkii tegey Raiisul Wasaaraha Turkiga, Recep Tayyip Erdogan iyo xaaskiisa oo ay wehliyaan wafdi heer sare ah ayaa waxay booqdeen Somalia. Turkiga waxaa uu safaarad ka furtey Somalia bishii November sannadkii 2011ka. Waxaana xilka danjirenimo ee Somalia uu Turkiga u soo magacaabey mid ka mid ah diblomaasiyintiisa ugu khibradda badan, Cemalettin Kani Torun. Shirkada diyaaradaha ee Turkiga (turkish Airlines) ayaa iyana caasimadda Somalia ee Muqdisho ka bilowdey duulimaadyo caadi ah, bishii March, 2012.
Ilaa iyo 12 ka mid ah hay'adaha samafalka ee Turkiga ayaa ka hawlgala Somalia. Dhowr dugsi oo Turkish ah ayaa Somalia ka furan, kuwaas ay maamusho hay'adda diiniga ee Gulen, iyadoo dhanka kalena uu deeqo aad u balaaran oo waxbarasho u fidiyo ardeyda Soomaalida inay wax ku soo bartaan Turkiga.
Waxaa shirka Turkiga ka dhacaya ka soo qeybgalaya oo kale Banka Adduunka, Bankiga Horumarinta Afrika, Banka Horumarinta Islaamka, Ururka Shaqaalaha Adduunka iyo ganacsato Turkish ah.
Wasiirka Dhaqaalaha ee Turkiga waxaa uu sheegey in shirkan waxyaabaha uu diiradda saari doono ay ka mid tahay abuurista fursado maalgashi oo gaar ah.
Somalia waxaa loo arkaa dal looga faaideysan karo dhanka malagashiga dhismaha, guryaha la dego, macdanta iyo beeraha.
Turkiga waxaa qaaradda Afrika maalgashigeeda si adag ugula tartamaya dalalka Shiinaha iyo India.